Godi Hi-Tech သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် 360Wh/kg semi-solid battery ကိုထုတ်လုပ် သည် - Pandaily
Godi Hi-Tech သည် ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် 360Wh/kg semi-solid battery ကိုထုတ်လုပ် သည်
May 27, 2022, 21:23ညနေ 2022/05/29 21:32:57 Pandaily
သောကြာ နေ့မှာ တရုတ် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူGedi Hi-Tech သည် (၁၁) ကြိမ်မြောက် သိပ္ပံနှင့်နည်းပညာ ညီလာခံကို Anhui, Hefei တွင်ကျင်းပ ခဲ့သည်. ယခုနှစ် အစောပိုင်းက ထုတ်လုပ် ခဲ့သော 360Wh/kg semi-solid state batteries များကို အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု စတင် ခဲ့သည်ဟု ကုမ္ပဏီက ကြေငြာခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် ဓာတ်ခွဲခန်း တွင် 400Wh/kg ternary semi-solid battery ၏ရှေ့ ပြေး ပုံစံကို လည်း လုပ်ဆောင်နေ ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
ထို့အပြင် Getie Hi-Tech နှင့် Volkswagen တို့ ပူးတွဲ တီထွင် ခဲ့သော ပထမ မျိုးဆက် ternary နှင့် lithium-iron standard batteries များသည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်မှု ကိုစတင်ခဲ့သည်။ Gotion Hi-Tech ဟာ အခုဆိုရင် Volkswagen ရဲ့ ဂျာမန် အဖွဲ့နဲ့ ပူးပေါင်းပြီး ဥရောပ နိုင်ငံ တွေအတွက် standard battery တွေ ထုတ်လုပ် နေပါတယ်။ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထုတ်လုပ်သည့် ternary ဘက်ထရီ များသည် စွမ်းအင် သိပ်သည်းဆ 635Wh/L နှင့် lithium iron batteries 435Wh/L. ရှိသည်ဟု ကုမ္ပဏီ ကပြောကြားခဲ့သည်။
Gotion Hi-Tech ကုမၸဏီဟာ ဒီ ႏွစ္ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္မယ့္ ဒီ မိတ္ဆက္ ပြဲမွာ ထုတ္ကုန္ အသစ္ ၂ မ်ိဳးကို မိတ္ဆက္ သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ်ခုမှာ အလွန် မြင့်မားသော စွမ်းအင် အချိုးအစား ရှိသည့် မျိုးဆက်သစ် ဘက်ထရီ ထုတ်ကုန် ဖြစ်ပြီးနောက် တစ်ခုမှာ စားသုံးသူ စျေးကွက် အတွက် ပထမဆုံး ထုတ်ကုန် ဖြစ်သည်။
Godi Gaoke ကို ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ မကြာသေးမီက ကုမ္ပဏီသည် ၂၀၂၁ ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံ စာနှင့် ၂၀ ၂၂ ပထမ သုံးလပတ် ဘဏ္ financial ာရေး အစီရင်ခံစာကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၎၏ ၀င္ေငြ သည္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ယြမ္ ၁၀ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၄၉ ဘီလ်ံ) ေက်ာ္လြန္ ၿပီး ယြမ္ ၁၀ ဒသမ ၃ ၅၆ ဘီလ်ံ သို႔ ေရာက္ရွိ ခဲ့သည္ဟု ဘ႑ာေရး အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ၂၀ ၂၂ ခုနှစ်တွင် Q1 ၏ ၀ င်ငွေ သည်ယွမ် ၃. ၉ ၁၆ ဘီလီယံ သို့ရောက်ရှိခဲ့ပြီး တစ်နှစ်လျှင် ၂ ၀၃. ၁၄% တိုးတက်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်တွင် Gotion သည် 210Wh/kg lithium ferrous phosphate cells နှင့် 302Wh/kg ternary cells များ ကိုစတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် 230Wh/kg lithium ferrous phosphate battery ကိုအောင်မြင်စွာ ဒီဇိုင်းဆွဲ ပြီး အပြီးသတ် ခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီသည် 360Wh/kg မြင့်မားသော စွမ်းအင် သိပ်သည်းဆ semi-solid state ဘက်ထရီ များအတွက် အမျိုးသားအဆင့် လုံခြုံရေး စမ်းသပ်မှု အသစ် ကိုအောင်မြင်စွာ အောင် မြ င်ခဲ့သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:တရုတ် စွမ်းအင် ဘက်ထရီ ကုမ္ပဏီ Gordi Hi-Tech သည် ဆွစ်ဇာလန် တွင် IPO တစ်ခု ကိုစီစဉ် နေသည်
အဆင့်မြင့် စက်မှု အင်စတီကျု ၏အဆိုအရ ။ တရုတ် စွမ်းအင် မော်တော်ယာဉ် ဘက်ထရီ အသစ် (GGII) သည် ယူနစ် ၃. ၅၂ သန်း တပ်ဆင် ထားပြီး ထိပ်တန်း ကုမ္ပဏီ ၅ ခုမှာ CATL, BYD, Getech, CALB နှင့် LG Energy တို့ဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် Godi Gaoke သည် စီး ရေ ၄၀၀, ၀၀၀ နီးပါး တင်ဆောင် ကာ ၁၁. ၂% ရှိသည်။
Ford သည် CATL နှင့် BYD တို့ကို ဘက်ထရီ ပေးသွင်း သူ များအဖြစ် အတည်ပြု သည်
မကြာသေးမီက ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သူများ အစည်းအဝေးတွင် Ford ၏လုပ်ငန်း လည်ပတ် ရေး အရာရှိ ချုပ် Lisa Drake က Ford သည် ဘက်ထရီ ပေးသွင်း သူ ငါး ဦး နှင့် ဆက်လက် ပူးပေါင်း မည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Auto Dec 07 ဒီဇင်ဘာ 8, 2021
China Battery Faucet CATL လက်အောက်ခံ ကုမ္ပဏီသည် သတ္တုတွင်း ကုမ္ပဏီ တစ်ခု တည်ထောင်ရန် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံ သည်
Guizhou Times Mining Co., Ltd. ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ ၃၁ ရက်တွင် တရားဝင် မှတ်ပုံတင် ထားသည့် အရင်းအနှီး ယွမ်သန်း ၈၀၀ (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၂၅. ၈ သန်း) ဖြင့် တည်ထောင် ခဲ့သည်ဟု China Enterprise Information Inquiry Platform Seven Check မှ ဖော်ပြခဲ့သည်။
Industry Jan 04 ဇန်နဝါရီ 7, 2022
CATL ၏ ဘက်ထရီ စက်ရုံ အသစ်သည် တက် စ လာ ကိုထောက်ပံ့ သည်
Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. (CATL) မှ တည်ဆောက် နေသည့် နောက်ဆုံးပေါ် lithium-ion ဘက်ထရီ စက်ရုံကို ရှန်ဟိုင်း တွင်စတင် ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။
Cross-border Jan 10 ဇန်နဝါရီ 10, 2022
တရုတ် ဘက်ထရီ ထုတ်လုပ်သူ CATL သည် လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ဘက်ထရီ လဲလှယ် ရေး ဝန်ဆောင်မှု ကိုစတင် ခဲ့သည်
Contemporary Ampere Technology Co., Ltd. ၏ ကုမ္ပဏီ ခွဲ တစ်ခုဖြစ်သော Contemporary Ampere Energy Service Technology Co., Ltd. သည် EVOGO ဟုခေါ်သော လျှပ်စစ် မော်တော်ယာဉ် ၀ န်ဆောင်မှု အသစ်ကို အင်္ဂါနေ့က စတင် မိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး ၎င်းတွင် modular ဘက်ထရီ လဲလှယ် မှု ပါဝင်သည်။
Industry Jan 18 ဇန်နဝါရီ 18, 2022